Ugaar Ah Ragga: 4 Waxyaabood Oo Ay Tahay Inaadan Ku Dhihin Haweeney - Aayaha
Ugaar Ah Ragga: 4 Waxyaabood Oo Ay Tahay Inaadan Ku Dhihin Haweeney
Aayaha editorFebruary 23, 2021
Waxaa jiraan dhowr waxyaabood oo nin walba ay tahay inuu iska ilaaliyo inuu ku dhaho haweeney inta lagu guda jiro wadahadalka maadaama aad burburin karto wada sheekeysiga aad la leedahay.
Waa kuwaan afar waxyaabood oo ay tahay inaadan ku dhihin haweeney.
1. Waxaad tahay haweeney caqli badan
Waa inaadan waligaa naag ku dhihin sidaan. Ku dhahida tan dumarka waxay ka dhigan tahay inaad u malaynayso in haweenku kuula egyihiin doqomo.
Ma jirto haween ku raaxeysata in haweenka ay kamid tahay iyada loo tixgeliyo inay yihiin doqomo. Waxaa jira habab ka wanaagsan oo lagu amaani karo caqligeeda, fadlan iska ilaali adeegsiga qadkan.
2. Haweenku ma jecla ragga wanaagsan
Ragga qaarkiis waxay u maleynayaan kaliya inay u fiicnaayeen haweeneyda iyagoo u sameeya waxyaabo wanaagsan. Waxaa laga yaabaa in waxyaabaha qaar ee ay u sameynayaan haweeneyda ay ka leeyihiin dano gaar ah.
Sidaa darteed markay haweeneyda diido ninka isagoo waxyaabahaas dhan u sameeyay islamarkaana ay u suurtagali weyso danihii uu ka lahaa , wuxuu ku soo gabagabeynayaa inuu dhaho haweenku ma jecla ragga wanaagsan. Sababtoo ah inaad u fiicnayd iyada macnaheedu maahan inay tahay inay kula haasaawdo. Fadlan ha isjahwareerin.
3. Haweenku way waalan yihiin
Markaad qof dumar ah u sheegto inaad u malaynayso inay haweenku waalan yihiin, waxaan la yaabanahay haddii aad ka filato inay ku faraxdo oo ay run ahaantii kuugu sacbiso hadalkaas. Hadaad u malaynayso inay dumarku waalan yihiin, fadlan ka fogow dumarka oo dhan.
4. Haweenku waxay rabaan inay guursadaan ragga hodanka ah kaliya
Ragga guud ahaan sameeya faallooyinka noocan oo kale ah waa niman leh kalsooni aad u hooseysa. Ma jiro nin isku kalsoon oo hadallada noocaas ah jeediya. Markaad sidaa ku tiraahdid haweeney, waxaad ula muuqaneysaa nin aan kalsooni isku qabin oo laga yaabo inuu wax matare yahay.
3 Waxyaabood oo ay tahay inaad sameyso si xiriirka u guuleysto (Lambarka 1-aad Waa Muhiim)
Way Adagtahay Inaad Iska Sii Deysid Nin Aad Jeceshahay, Laakiin Mararka Qaar Waa Wax Sax Ah Inaad Sameyso
Miyay Lacagta Muhiim U Tahay Guurka ? [Daraasad]
Haddii Gabadha Aad Xiriirka Leedihiin Ay Sameyso Arrimahaan Naadirka Ah Guurso